I-apple ipad air 4 umhla wokukhutshwa, ixabiso, amanqaku kunye neendaba
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Umhla wokukhutshwa kwe-Apple iPad Air 4, amaxabiso, amanqaku kunye neendaba
Umhla wokukhutshwa kwe-Apple iPad Air 4, amaxabiso, amanqaku kunye neendaba
Uthotho lwe-iPad Air lwaluqhele ukuba njalo apile & apos; s umnikelo ophakathi nendawo kwabo bafuna ithebhulethi enamandla (i-2nd-gen) ye-Apple Ipensile yenkxaso, kodwa bazimisele ukwamkela uyilo oludala kunye neenkcazo ezisezantsi kune-IP Pro, ngexabiso elifanelekileyo. Ubuncinane bekunjalo kwi-iPad Air 3, kuba i-iPad Air 4 yamva nje yazisa zombini uyilo lwangoku, lwangoku kunye netoni yeempawu zobungcali. Nantsi yonke into onokufuna ukuyazi malunga nokuyilwa kwakhona kwe-2020 iPad Air 4.
Apple iPad Air 4 umhla wokukhutshwa
Ixabiso le-Apple iPad Air 4
Uyilo lwe-Apple iPad Air 4 kunye nomboniso
Iinkcukacha ze-Apple iPad Air 4
Isoftware ka-Apple iPad Air 4
I-2020 iPad Air 4 yenziwa yafumaneka ngo-Okthobha 23. Jonga eyethu I-iPad Air (2020) uphononongo apha .
Thenga iApple iPad Air 4 entsha (2020) kwiApple.com
Unokuba nomdla kwi:
I-Apple iPad Air 4 vs iPad 8: Yeyiphi oyifunayo?
I-Apple iPad Air 4 vs iPad Air 3: Ngaba kufuneka uphucule?
Uvavanyo lwe-Apple iPad Pro (2020)
Uvavanyo lwe-Samsung Galaxy Tab S7 +
I-Apple iPad Air 3 (2019)
Imboniso ye-iOS 14
Ixabiso elitsha le-Apple iPad Air 4 liye laxhuma nge-100 leedola ngaphezulu kwangaphambi kwayo, njengoko bekulindelwe, kuthathelwa ingqalelo ukuba amarhe oyilo lwala maxesha aphele eyinyani. I-iPad Air 4 iqala kwi- $ 599. Amaxabiso azo zonke iimodeli ze-iPad Air 4 (2020) zezi zilandelayo:
$ 599 ye-64GB ye-Wi-Fi iPad Air 4 (2020)
$ 749 ye-256GB ye-Wi-Fi iPad Air 4 (2020)
I-729 yeedola ye-64GB yeWi-Fi + yeselfowuni ye-iPad yomoya 4 (2020)
$ 879 ye-256GB ye-Wi-Fi + yeselfowuni ye-iPad Air 4 (2020)
Amahemuhemu ayenyanisile! IPad Air 4 entsha iya kudlala uyilo lwangoku kunye nemibala emitsha entsha.
Njengamarhe amaninzi kunye nokuvuza kucetyisiwe, imidlalo entsha ye-iPad 4 (2020) uyilo oluhlaziyiweyo, olufana nePad Pro. Eyona nto ibaluleke kakhulu, oku kuthetha umboniso wescreen esine-symmetrical, slim bezels, enika i-iPad Air 4 ukujonga okwangoku uthotho belufuna kangangeminyaka embalwa.
Umboniso ngokwawo ngoku uyi-10.9-intshi 2360 x 1640 i-retina enye, edlala ngaphezulu kweepikseli ezizigidi ezi-3.8. Kukwenziwe i-laminated ngokupheleleyo, kubandakanya ukutyabeka okunganyangekiyo kunye nokuxhasa iNyaniso yeToni, njengePro Pro.
Izinketho zemibala emitsha
Ngokungafaniyo nebhajethi ye-2020 iPad, eza ngemibala emithathu kuphela, i-2020 iPad Air iza ngemibala emibini eyongezelelweyo, eyiBlue Blue kunye neGreen. Zonke ezi-5 ziyahluka ngombala okwi-2020 iPad Air zezi zilandelayo:
Ukucaciswa kweApple iPad Air 4 (2020)
Njenge-Pro Pro, i-iPad Air 4 ixhasa iApple & apos; Ikhibhodi yobuGcisa kunye nePensile yesi-2 yesizukulwane.
I-A14 chip ye-Bionic, i-6-core CPU
Uyilo olutsha ngomboniso wescreen sonke
Inzwa yesazisi sokuchukumisa esidityaniswe kwiqhosha lamandla eliphezulu
Imibala emitsha-iRose Gold, Luhlaza kunye neBlue Blue
I-10.9-intshi 2360 x 1640 i-retina display ngeTone eyiyo
Izithethi zestiriyo, enye kwicala ngalinye
Uhlobo lwe-C lwe-USB
I-60% ngokukhawuleza kwe-LTE
Ipensile ye-Apple 2 kunye nenkxaso yekhibhodi yoMlingo
I-64GB okanye i-256GB yokugcina
Ukongeza kuyilo oluhlaziyiweyo, i-2020 Apple iPad Air 4 lisilo ngaphakathi. Inika i-chip ye-A14 Bionic chip, iApple & iiapos ezikhawulezayo ngexesha lokukhululwa kwe-Air 4, eyenza i-iPad Air 4 kunye ne-apos; ukusebenza kwe-40% ngaphezulu ngaphezulu komoya 3. I-Air 4 ikwanakho ukuqhubekeka ngokukhawuleza kwemizobo engama-30% . Ngexesha lokwaziswa kwayo, iApple ikwaqaphele ukuba i-iPad Air 4 ibandakanya injini ye-neural ekhawulezileyo kunye namandla okuphucula amandla okufunda.
Olunye utshintsho oluphawulekayo lolunye ebesilulindele kumahemuhemu- imidlalo ye-iPad Air 4 izibuko lohlobo C lwe-USB endaweni yoMbane. Eli zibuko livumela ukuhanjiswa kwedatha ukuya kuthi ga kwiigigabithi ezi-5 ngomzuzwana (amaxesha ali-10 ngokukhawuleza kunakwimodeli yomoya yangaphambili, eyayisebenzisa umbane), kwaye iya kuxhasa iikhamera, ukuqhuba kwangaphandle kunye nabahloli bangaphandle ukuya kwisisombululo se-4K.
I-Apple iPad Air (2020)
500 cd / m2 (ubusuku)
Ireyithi yokuhlaziya ye-60Hz, ukutyabeka kwe-Oleophobic, isivamvo sokukhanya kweAmbient
Iapile A14 Bionic
Hexa-core, 3100 MHz, Firestorm kunye Icestorm, 64-bit, 5 nm
I-Apple 4-core GPU
I-LTE: iiyure ezili-9; I-Wi-Fi: iiyure ezili-10
I-12 MP (i-PDAF, inzwa ye-BSI)
Ubungakanani besithuba: F1.8
3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (HD epheleleyo) (240 fps)
Ividiyo ephelelwe lixesha, Ukugxininisa okuqhubekayo, ukuthathwa kwemifanekiso ngexesha lokurekhodwa kwevidiyo, i-EIS
1920x1080 (HD epheleleyo) (60 fps)
9.75 x 7.03 x 0.24 intshi (247.6 x 178.5 x 6.1 mm)
16.23 oz (460.0 g)
iumndililiyi-16.3 oz (464 g)
Iminwe yeminwe (ukuchukumisa)
$ 729 Bona i-Apple iPad Air (2020) epheleleyo ye-specs ukuthelekisa okanye ukuthelekisa kwezinye iifowuni usebenzisa isixhobo sethu sokuthelekisa.
Iikhamera ze-Apple iPad Air 4
I-iPad Air 4 iza nekhamera engaphambili ye-7-megapixel yeXesha lokuPhambili elinakho ukubanjwa kwevidiyo ye-1080p HD kunye ne-Smart HRD. Ikhamera yangasemva ye-2020 iPad Air iyafana naleyo ikwi-Pro Pro- inzwa ye-12-megapixel enesakhono sokurekhoda kwe-4K 60 ngomzuzwana-wesibini (FPS). Kukwathethwa kwakhona ukuba kuboniswe uzinzo lwevidiyo oluphuculweyo.
Izithethi ze-Apple iPad Air 4
I-2020 entsha ye-iPad Air 4 ineesithethi ezine, kodwa eneneni ipakisha izithethi ezibini kuphela. Iindaba ezimnandi zezi, ngeli xesha ngalinye likwicala elichaseneyo lethebhulethi. Ke, abasebenzisi banokufumana isiphumo sokwenene sestereo xa bebukele umxholo kwimowudi yokuma komhlaba. Ngaphambili kwiimodeli zomoya zombini izithethi zazikwicala lasekunene lethebhulethi, kwaye zisabhajethi ye-2020 iPad. Ekusebenziseni kwethu, sifumene izithethi zininzi kakhulu kwaye zigcwele, zinobukho obuhle bee-bass.
I-iPadOS 14 iya kusebenzisa iibhola ezisecaleni kunye neemenyu zokutsala ezantsi ukuze ube namava angcono ekhompyuter
I-iPad Air 4 iqhuba i-iPadOS 14 ekusungulweni, eza nenani lokuhlaziywa kokusebenziseka. Eyona nto ibaluleke kakhulu, isizukulwane sesi-2 sePensile ye-Apple exhaswa yi-2020 iPad Air yaba luncedo ngakumbi ngeScribble. I-Scribble yinto ye-iPadOS 14 evumela abasebenzisi ukuba babhale ngesandla nakweyiphi na intsimi yokubhala ngePensile ye-Apple, endaweni yokuba batshintshe phakathi kwayo kunye nekhibhodi ekwi-screen (okanye ebonakalayo).
Isikhangeli seSafari kwi-iPad ngoku siyakwazi ukuguqulela iwebhusayithi kwiilwimi ezisixhenxe ezahlukeneyo. I-Safari ikwanazo neempawu zabucala ezandisiweyo, kubandakanya nokujonga iipassword zomsebenzisi ezibuthathaka.
Isikrini sasekhaya se-iPad kunye ne-apos; kwi-OS OS ye-14 enezinto ezenziwe ngokutsha kwiiwijethi namhlanje zokujonga, ezithatha ithuba elingcono kwithebhulethi nakwiziboniso ezinkulu ngokubonisa ulwazi ngakumbi kunangaphambili. Iwijethi zinokucwangciswa ngcono kusetyenziswa ukhetho olutsha lwe-Smart Stack, olunokuthi lubeke iiwijethi ezahlukeneyo kwindawo enye kwaye zisebenzise isixhobo sobukrelekrele ukukubonisa iwijethi elungileyo ngexesha elifanelekileyo losuku.
Ngaba ii-iphone zilungelelanisa ukonga emini
Ukuthelekiswa kwesayizi ye-droid turbo 2
Eyona Galaxy S21 Ultra, S21 Plus, kunye neetshaja ze-S21 zokuthenga
Ngaba ungakhe uthenge into encinci ye-smartphone eyaziwayo?
I-T-Mobile iqala ukuthengisa iApple Watch SE, uthotho 6, kunye ne-iPad entsha kwangoko
Idili: I-LG Bukela i-Urbane 2nd Edition iyathengiswa nge-171,99 $ kuphela kwi-eBay
Uvavanyo lweSoftware esisiseko-Imibuzo kunye neempendulo
'Hei Google' kungekudala iza kuqalisa uMncedisi kaGoogle kwii-handsets ze-Android
Ezona meko zilungileyo zeGoogle Pixel kunye nePixel XL
I-Apos ye-Ultimate Movie Weekend 'okuthetha ukuba iirenti ziqala kwiipesenti ezingama-99 kwiVenkile yeGoogle Play
Ixabiso leGPS S8 kunye ne-S8 + kunye nomhla wokukhutshwa kwiVerizon, AT & T, T-Mobile, Sprint
Isamsung Gear VR (yeNqaku 8) izandla-on